Soo dejisan Trillian 6.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Trillian
Trillian – software caan ah oo loogu talagalay wada xiriirka fudud ula dadka dunida ku baahsan. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad isku mar ku xidhmaan hab maamuuska fariimaha kala duwan, sida Windows Live Rasuulka, AIM, Yahoo! Rasuulkiisa, ICQ iyo dhaqanka Facebook, Twitter, afargeesood, LinkedIn, iyo adeegyada email. Trillian taageertaa ugu ah hawlaha aasaasiga ah, file sharing, aragtida iyo isbedelka macluumaad, goobaha ammaanka, awood u leh inay ka shaqeeyaan via wakiil ah iwm software waxay leedahay interface saaxiibtinimo, u saamaxaaya in ay xirmaan Intaa waxaa dheer iyo bedesho muuqaalka isticmaalaya kale qarbeddada.
Awoodda in ay isku mar ku xidhmaan badan hab maamuuska Fariin caan ah
Isku dhex leh shabakadaha bulshada iyo adeegga email
Awoodda in ay isku xiro iyo kabo adhidibadeed hargahood oo la isticmaalo
Soo dejisan Trillian
Faallo ku saabsan Trillian
Trillian Xirfadaha la xiriira
Tani waa software si aad u daawato waxyaabaha fiidiyowga laga soo saaro kuwa soo saarayaasha filimka ugu jecel, taxanaha tv-ga iyo bandhigyada tv-ga sida Netflix, Hulu, HBO iyo kuwo kale.
Soo dejiso Master – maamule soo dejiso si aad uga soo dejiso noocyada faylasha ee kala duwan internetka. Softiweerku wuxuu badalayaa heerka caadiga ah ee wax soo dejista wuxuuna bixiyaa xawaaraha soo degsiga ee kordhay.
software waxaa loogu talagalay si loo soo celiyo xogta lumay ama si qalad ah la tirtiray ka-macruufka qalab ay ka mid yihiin ka "casriga ah bricked".